धेरैजसो महिलालाई विवाहपछि हुन्छ यी ५ कुराको पछुतो !! | सुदुरपश्चिम खबर
धेरैजसो महिलालाई विवाहपछि हुन्छ यी ५ कुराको पछुतो !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ १७, २०७८ 1
हुनत कहिले पनि पूर्व प्रेम वा पतिसँग तुलना गर्नु हुँदैन्। कहिलेकाही विवाहपछि महिलाका अघि विभिन्न समस्या आउने गर्दछन्।
तब उनीहरुलाई महशुस हुने गर्दछन् की यो भन्दा बरु पूर्व प्रेम वा पति भएको भए राम्रो हुने थियो होला। यस्तो अवस्थामा महिला आफ्नो विवाहको फैसलामा पछुतो मान्ने गर्दछन्।
विवाह गर्ने वित्तिकै युवतीमा बच्चा जन्माउने दवाब आउन सुरु हुन्छ। अरु यसका लागि युवती तयार नहोस्, तर कुनै न कुनै बहानामा उसले यो कुरा सुन्नु पर्दछ। हरेक दिन बच्चाको कुरा सुन्दा उनीहरुलाई विवाह गरेकोमा पछुतो हुने गर्दछ। नयाँ पुस्ता बाट सभार